August | 2019 | HimiloNetwork
Himilo August 1, 2019	Leave a comment 405 Views
DELHI (HN) — 25-kii sanno ee lasoo dhaafay, Mani Manithan wuxuu gadaal-gadaal ugu socdaa si loo helo nabad guud oo dunida oo dhammi ka mahdiso.Sannadkii 1989-kii ayuu bilaabay howlgalkiisa gadaal-u-socoshada, kaddib markii rabshado lagu hoobtay ay ka dhaceen gudaha degmadiisa kuwaas oo gilgilay dareenka dadweynaha Hindiya oo dhan. Hadda wuu la qabsaday ugu danbeyntii. Mana karo inuu horay ugu socdo ...
Muxuu Medi Bastoni u doortay inuu gadaal-gadaal ugu socdo masaafo dhan 800 km?
Himilo August 1, 2019	Leave a comment 447 Views
MUQDISHO (HN) — Nin u dhashay dalka Induniisiya ayaa soo jiidanaya indhaha warbaahinta kaddib markii uu qaaday tallaab hor leh oo uu ku badbaadinayo degaankiisa. Medi Bastoni, oo 43 jir ah, ayaa socod lugta ah oo gadaal-gadaal u socosho ah wuxuu kaga soo tagay Bariga Java. Wuxuuna doonaya inuu ku yimaado caasimadda Jakarta si uu ula kulmo Madaxweynaha. Safarkiisu wuxuu ...
Shiinaha oo diiday Qoraallada Carbeed ee muujinaya Astaan Islaam.
Himilo August 1, 2019	Leave a comment 315 Views
BEIJING (HN) — Saraakiisha dowladda Shiinaha ee caasimadda Beijing ayaa faray dukaamada iyo maqaayadaha iibiya cunnooyinka xalaasha ah inay tirtiraan qoraallada afka Carabiga ku qoran ee la xiriira dhaqanka Islaamka, sida laga soo xigtay Reuters. “Kani waa dhaqan shisheeye oo kahor imaanaya midka Shiineeska ah,” ayuu yiri mid kamid ah milkiilayaasha maqaayadaha la faray inay raacaan amarka. Isaga oo la ...
Himilo August 1, 2019	Leave a comment 441 Views
MUQDISHO (HN) — 130 jir dalka Induniisiya u dhashay ayaa yimid magaalada Jiddah ee dalka Sucuudiga si uu sannadkan kaga mid noqdo xujeyda gudanaysa acmaasha Xajka. Ohi Aidros Samr waxaa safarkiisa ku wehlinaya 6 xubnood oo qoyskiisa kamid ah. Gudaha garoonka diyaaradaha waxaa ku qaabilay xubno sare oo kamid ah saraakiisha Xarameynka kuwaas oo hadyado iyo ubaxyo guddoonsiiyay. Laba maalin ...
Kalluumaysiga sharci-darrada iyo rogaal-celiska Burcad-badeedda
“Majoojinayo cunnimada ilaa aan ka dhinto!”
Eyga 2 lugood oo kaliya ku socda